Guddiga Joogtada Baarlamaanka oo maanta ka arrinsanaya xilliga uu furmayo Kalfadhiga 7aad | Jowhar Somali news Leader
Home News Guddiga Joogtada Baarlamaanka oo maanta ka arrinsanaya xilliga uu furmayo Kalfadhiga 7aad
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ayaa maanta oo isniin ah kulan yeelanaya, iyagoo ka arrinsanaya xilliga rasmiga ah uu furmayo Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulankan Guddiga Joogtada iyo Guddoonka Golaha Shacabka ayaa sidoo kale looga hadli doonaa ajandayaasha kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka.
Sidoo kale waxaa Guddigu go’aamin doonaa xilliga Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yarey ay hor imaan doonta Baarlamaanka, si looga dhageysto warbixin ku saabsan nooca doorashada iyo xilliga ay dhaceyso, qaabka Guddiga ugu diyaar garoobay doorashada.
27-ka bishan May oo la filayay in Guddoomiye Xaliima Yarey inay hor-tagto Baarlamaanka ayaa dib u dhac ku yimid, waxaana la filayaa in horraanta bisha June ay hortagto Baarlamaanka, si ay Baarlamaanka warbixin uga jeediso.
Su’aalo kala duwan ayaa ku horgudban Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaran oo ku saabsan awoodda ay u leeyihiin in doorashada ay xilligeeda ku qabtaan.
Hadal heyno kala duwan ayaa maalmihii la soo dhaafay soo baxayay, kaasoo ahaa inuu jiro muddo kororsi, maadaama uu shaki uu ka jiro in xilliga u dhiman Baarlamaanka iyo Madaxtooyada lagu qabto doorasho.